Burushka qurxinta-11 burush
Astaanta astaanta gaarka ah ee astaanta gaarka ah ee qurxinta buraashka 11pcs buraashyada qurxinta madow ee lagu dhejiyo timo farsamo oo tayo sare leh.
Midka koowaad:Moodelkan gogosha burushka waa moodada suuqa, timaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah waa kuwo jilicsan oo maqaarka u fiican. Qalabka gacmeedku waa alwaax taas oo raaxo leh oo waarta.
Wax tayo sare leh oo ka samaysan fiber fiber, jilicsan oo raaxo leh, oo siinaya taabasho khafiif ah iyo nabaad-guurka 'synthetic bristles' si loo hubiyo habsocodka dalab fudud iyo khibrad adeegsiga.
Ta labaad ee aad ku taabatid mid ka mid ah burushyadan dhabanka, waxaad la yaabi doontaa sida jilicsanaanta nabarradu u yihiin. Qalabkan waxaa loola jeedaa inuu ku daydo saameynta qurxinta buraashka hawada, taasoo la micno ah aasaaskaaga, qarinta, iyo cirridka ayaa si aan habooneyn u adeegsan doona.
Magaca badeecada Waxyaabaha Qaabka Alaabada halkii go'an Cabir Astaanta Xirmo
Qalabka qurxinta qurxinta Timo dabiici ah, gacmo alwaax ah mooddo 11 Cabbirka loo habeeyay Astaanta kartoo Xirxirida kartoo
Ururinta oo dhammaystiran waxay ka kooban tahay 11 burush oo leh tayo-gacmeed tayo-sare leh oo qaab-gacmeed gacmeed lagu sameeyay. Gacan-siinta ayaa kaa caawinaysa inaad siiso xakamaynta ugu dambeysa arjiga qurxinta si ay kaaga caawiso abuuritaanka muuqaal kasta oo qurxin ah oo aad rabto. Qalabkan burushka ayaa loo soo saaray si masuuliyad leh.
Saddexda hore:Macaamiil badan ayaa na siiya dib u eegis aad u sareysa kadib markay tijaabiyeen, burushkeenu waa tayo sare, maxaa yeelay waxaan nahay warshad qurxiyo, waxaanan leenahay 15 sano oo khibrad xirfadeed leh arimahan.
Naqshadeynta qaabdhismeedka iyo khadadka wajiga ku habboon, waxay ku habboon tahay sameynta maalinlaha ah waxayna si fudud kuugu abuuri kartaa qurxiyo aan iin lahayn.
Haddii aad raadineyso ikhtiyaar bey'adeed oo saaxiibtinimo leh, buraashkan muhiimka ah ee laga soo dejiyey EcoTools waa mid waajib ah. Waxay yihiin 100% vegan oo laga sameeyay aluminium dib loo warshadeeyay.
Afarta hore:Codsigeena qurxinta waa aalad aan iin lahayn oo aad u isticmaasho inaad xaaqdo, ku wareejiso, kuna qasto meesha. Haddii aad abuureyso indhaha qiiqaya ama dhabannada jeexan, kuwani waa noocyada aad ku rabto qalabkaaga.
Qalabkan cadayga ah ee cadaygu wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inuu kaa caawiyo abuurista midab aan iin lahayn. Dejintu waxay ka kooban tahay burush aasaasi ah si aad u mariso salkaaga, burush sifeyn ah oo sifiican ufiicnaada, buraash qarinaya oo faahfaahsan si loo daboolo cilladaha, iyo burush qarin weyn oo indhaha hoostooda iyo agagaarka sanka. Burushka budada moodada ah waxay bixisaa dhammeystirka dhammaystirka muuqaal aan fiicnayn. Dhamaan burushyada waxay ku jiri karaan joonyad maqaar qurux badan oo kufiican socodka ama safarka.
Hore: Qeexid Sare Palette Eyeshadow Palette - Eye makeup-BD15-DW - JOYO
Xiga: Burushka qurxinta-14 burush
Burushka wax qariya
Dajisaa Burushka Mashiinka Xirfadeed
Burushka qurxinta-14 burush
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Matte Eyeshadow Palette, Liimiga Shimmer, Lipstick yar, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Burushka ugu Fiican, Dhammaan Alaabooyinka